Madaxweyne Xasan Sheekh oo Xildhibaannada ugu baaqay ka qeyb qaadashada la-dagaalanka Al-Shabaab | dayniiile.com
Home WARKII Madaxweyne Xasan Sheekh oo Xildhibaannada ugu baaqay ka qeyb qaadashada la-dagaalanka Al-Shabaab
Madaxweyne Xasan Sheekh oo Xildhibaannada ugu baaqay ka qeyb qaadashada la-dagaalanka Al-Shabaab
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xalay kulan Casho ahaa la qaatay Xildhibaano katirsan labada Aqal ee Baarlamaanka Soomaaliya, isaga oo kala hadlay arrimo dhowr oo ku saabsan xaaladda dalka.
Madaxweynaha ayaa Xildhibaannada sigaar ah ugala hadlay Arrimo ay kamid yihiin, Amniga, dhameystirka Dastuurka, hagaajinta Shaqada dowladda iyo Arrimaha doorashooyinka.
Wararka aan helnay ayaa sheegaya in Madaxweynaha Soomaaliya uu ka dalbaday Xildhibaannada inay qeyb ka noqdeen xoreynta dalka iyo la-dagaalanka Al-Shabaab taas oo muhiim u ah howlaha shaqo ee dowladda Soomaaliya.
Sidoo kale Xildhibaannada ayuu ugu baaqay inay Shaqada hagaajiyaan ayna gutaan xilli hore waajibaadkooda Shaqo sida fadhiyada Baarlamaanka oo kooram la’aan mararka qaar u baaqda, isaga oo Xildhibaannada ka codsaday inay shaqo badan geliyaan sharciyada horyaalla.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa sidoo kale kala hadlay arrimaha Abaaraha wuxuuna sheegay inay waajib tahay waxka qabashada arrimaha abaaraha si looga gudbo xaalada cuna yari iyo macluusha ee xilligaan kajirta meelo kamid ah dalka Soomaaliya.
72 Saacadood ee soo socota ayaa waxaa lagu wadaa in Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheeku Maxamuud uu Magacaabo Ra’iisul Wasaarihii bedeli lahaa Maxamed Xuseen Rooble.
Previous articleMaxuu madaxweyne Xasan Sheekh uga hadlay kalmadiisii Casha sharafta uu u sameeyay xildhibaannada 2ba aqal
Next articleDowladda oo sheegtay in howlgal lagu dilay Xubno katirsan Al-Shabaab
Ciidanka dowladda & kuwa Galmudug oo sameeyay howlgal ka dhan ah...
Ergayga Gaarka ah ee Arrimaha Bani’aadannimada oo booqday dad kasoo barakacay...
Kulan ku saabsan sugida Amniga gobolka Mudug oo Gaalkacyo ka dhacay